मास्कको साथ अनुहार आईडी कसरी प्रयोग गर्ने: methods विधिहरू जुन काम गर्दछन् मोबाइल फोरम
मास्कको साथ अनुहार आईडी कसरी प्रयोग गर्ने
तपाईंको अनलक गर्न समस्याहरू आईफोन कोरोनाभाइरस को समयमा अनुहार मान्यता प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? हामी तपाईंलाई व्याख्या गर्दछौं मास्कको साथ अनुहार आईडी कसरी प्रयोग गर्ने.
El मास्कको प्रयोग यो महामारीको एक प्रभावशाली माध्यमको रूपमा संसारको धेरैजसोमा पहिले नै सामान्य भइसकेको छ। प्रायः हामी सबै असुविधाको अभ्यस्त भएका छौं जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा आउँदछ, तर आईफोन प्रयोगकर्ताहरूले एउटा अर्को कष्ट पाएका छन्: अनुहार आईडी प्रयोग गरेर तपाईंको उपकरणहरू अनलक गर्न सक्षम छैन.
फेस ID एक हो २०१ technology मा एप्पल द्वारा विकसित टेक्नोलोजी यसले तपाईंलाई आईफोन X र पछिका मोडेलहरू अनलक गर्न अनुमति दिन्छ, साथ साथै भुक्तानी र अन्य कार्यहरू गर्दछ, अनुहार पहिचान मार्फत। यो उपकरणको स्मृतिमा पहिले भण्डारण गरिएको प्रयोगकर्ताको छविसँग प्रयोगकर्ताको अनुहारको तुलना गरेर हासिल गरिएको हो। राम्रो विचार। तर २०१ 2017 मा कसैले पनि कल्पना गर्न सकेन कि केही वर्ष पछि हामी यस अवस्थाको अनुभव गरिरहेका छौं।
अवश्य पनि, एक मास्कले ढाकेको आधा अनुहार लगाएको तथ्यले फेस ID लाई राम्रोसँग काम गर्न गाह्रो बनाउँदछ। र यो एक समस्या हो जुन सबै आईफोन प्रयोगकर्ताहरूले व्यवहार गर्नुपर्दछ, बाट आईफोन एक्स पछि
प्रयोगकर्ताहरूको नयाँ पुस्ताहरूका बीच, फेस ID को प्रयोग, छिटो र सजिलोले पासकोड विधि विस्थापित गर्यो। यद्यपि अब उनीहरू आफ्ना उपकरणहरू अनलक गर्न यसलाई फेरि प्रयोग गर्न बाध्य छन्। प्रश्न यो हो: मास्क लगाएको भए पनि फेस आईडी मार्फत अनलक गर्नको लागि कसरी आईफोन कन्फिगर गर्न सकिन्छ?
1 एप्पल को स्टपग्याप समाधान
2 मास्कको साथ अनुहार आईडी प्रयोग गर्न कसरी आईफोन सेट अप गर्ने
2.1 1 विधि
2.22विधि
3 एप्पल वाचको साथ आईफोन अनलक गर्नुहोस्
4 कसरी अनुहार आईडी असक्षम गर्ने
एप्पल को स्टपग्याप समाधान
एप्पल विश्व २०2020० मा मास्कको प्रयोग अनिवार्य भएपछि मे २०२० मा फिर्ता उजुरीको एक ब्यारेज प्राप्त भयो। उनको प्रतिक्रिया द्रुत थियो: मा आईओएस १२.१.। बीटा संस्करण, प्रणाली पत्ता लगायो कि प्रयोगकर्ताले मास्क लगाएको थियो र स्वचालित रूपमा पासवर्ड प्रविष्ट गर्न स्क्रिनमा सन्देश प्रदर्शन गर्‍यो। एक तरीकाले, यो दिँदै थियो एक कदम पछि, तर यो विचार कम्तिमा आईफोन प्रयोगकर्ताहरूको निराशाबाट बच्न, जो अचानक फेला पर्दछ कि फेस आईडी अब काम गर्दैन।
यद्यपि यसले ती व्यक्तिलाई पनि मद्दत गरेनन जोसँग अघिल्लो संस्करण थियो। तपाईंको मामलामा, तिनीहरूले आफ्नै अनुहार आईडी अक्षम गर्न आवश्यक छ:
मास्कको साथ अनुहार आईडी प्रयोग गर्न कसरी आईफोन सेट अप गर्ने
तर यो वास्तविक समाधान होईन, समस्याको चारै तिर मात्र। प्रयोगकर्ताहरू वास्तवमा चाहिने कुरा भनेको मास्कको साथ अनुहार आईडी प्रयोग गर्न सक्षम हुनु हो। वास्तबमा, तपाईंको अनुहारलाई उजागर गर्दा तपाईंको मोबाइल एक स्थानमा प्रयोग गर्नका लागि यो अनुमति छैन जहाँ समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। भाग्यवस, यस मुद्दालाई सुल्झाउने अन्य तरिकाहरू छन्:
यो एक समाधान हो जुन जटिल देखिन्छ तर वास्तविकतामा यो यति जटिल छैन। र काम गर्दछ।
यसमा मास्कलाई आधामा तह लगाईन्छ, एउटा कानलाई रबर ब्यान्ड समातेर राखिन्छ, ताकि कपडाले केवल अनुहारको आधा भाग, दायाँ वा बायाँ कभर गर्दछ। अर्को तपाईले आईफोन सेटिंग्समा जानुपर्नेछ, फेस आईडी पहुँच गर्नुहोस् र हाम्रो पासवर्डको साथ पहुँच गर्नुहोस्। त्यहाँ एक पटक, तपाईले विकल्प छान्नु पर्छ "वैकल्पिक उपस्थिति सेट अप गर्नुहोस्".
सायद केहि असफल प्रयासहरू पछि, जसमा सन्देशले हामीलाई चेतावनी दिन्छ कि हाम्रो अनुहार ढाकिएको छ, क्यामेरा सही गहिराइ यो सफलतापूर्वक हाम्रो अनुहार स्क्यानिंग समाप्त हुन्छ। एक पटक अपरेशन समाप्त भएपछि अनुहारको अर्को आधा भाग कभर गर्नुपर्दछ र नयाँ स्क्यान गर्नु पर्छ। यस पछि, मास्कमा अनुहार आईडी प्रयोग गर्दा कुनै समस्या हुनु हुँदैन।
दुर्भाग्यवस, यो प्रणाली यसले काम गर्दैन यदि एक वैकल्पिक उपस्थिति पहिले नै सेट अप गरिएको थियो। त्यो अवस्थामा, यो केवल फेस ID पुन: स्थापना र यसलाई फेरि कन्फिगर गर्न बाँकी छ।
मास्कहरू सहित अनुहार आईडी प्रयोग गर्नका लागि युक्तिहरू
यदि अघिल्लो विधिले काम गरेको छैन भने (वा हामीसँग पहिले नै फेस ID मा वैकल्पिक उपस्थिति सुरक्षित गरिएको थियो), तपाईं दोस्रो विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। पहिले, तपाईंले फेस ID पुन: स्थापना गर्नुपर्नेछ र फेरि सुरु गर्नुपर्नेछ, तर यस पटक पहिलो स्क्यान बनाउने क्रममा हामी अनुहारको एकपट्टि मास्क लगाउने छौं।
एक पटक यो सकिएपछि, हामी वैकल्पिक उपस्थिति विकल्पमा जान्छौं, यस पटक तपाईंको अनुहारको अर्कोपट्टि मास्क राख्दै, पहिलो स्क्यानमा खाली छोडियो।
दुई स्क्यान पछि, हामी अनुहार आईडी आराम गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ मास्क हटाए बिना।
एप्पल वाचको साथ आईफोन अनलक गर्नुहोस्
त्यहाँ अझै अन्तिम र भर्खरको फिक्स आईओएस १ recent..14.5 को हातबाट आउँदैछ जुन हालै बेटामा छ र सम्भवतः अप्रिलको शुरुमा आईफोनहरूमा आइपुग्नेछ।
एप्पल वाच मार्फत अनुहार आईडी अनलक गर्नुहोस्
स्पष्ट रूपमा, यो केवल एक को लागी उपयोग को लागी एक छ Apple Watch con वाचओएस .7.4..XNUMX (हालै बीटा संस्करणमा) र जसको पासपोर्ट सक्षम छ उनीहरूको आईफोनमा। यो नभएको खण्डमा, त्यहाँ कुनै ठूलो समस्या छैन। केवल सेटि Settingsहरूमा जानुहोस्, पासकोड चयन गर्नुहोस् र पासकोड सक्रिय गर्नुहोस्। अर्को आवश्यकता कलाई पत्ता लगाउन सक्रिय पनि छ।
एप्पल वाच समारोहको साथ आईफोन अनलक सक्रिय गर्नको लागि, निम्नानुसार अगाडि बढ्नुहोस्:
सेटिंग्स मा जानुहोस्।
पहुँच फेस आईडी र पासकोड।
तपाईको पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
चयन गर्नुहोस् एप्पल वाचको साथ अनलक गर्नुहोस्।
यो गर्दै, जबसम्म हेर्ने हाम्रो मनलाई मा छ र अनलक छ, जब हामी फेस आईडी संग आईफोन अनलक गर्न को लागी कोशिश गर्छौं (आईफोनले पत्ता लगाएको छ कि हामीले मास्क लगाएका छौं), यो स्वचालित रूपमा अनलक हुनेछ। त्यहि समयमा, एक सन्देश एप्पल वाच मा देखा पर्नेछ कि आईफोन अनलक छ र प्रयोग गर्न को लागी तयार गरीएको छ।
कसरी अनुहार आईडी असक्षम गर्ने
समस्या अन्त्य गर्नका लागि सरल विकल्प भनेको अनुहारको ID को एक साधनको रूपमा अक्षम पार्नु हो अनलक आईफोन। निम्न अनुसरणहरू:
आईफोन अनलक गर्न बायोमेट्रिक प्रकार्यको प्रयोग असक्षम गर्नुहोस्।
यो गरिसकेपछि, हाम्रो आईफोनलाई एक पहुँच कोड आवश्यक पर्दछ जब हामी त्यसलाई अनलक गर्न आवश्यक हुन्छ वा आफैलाई एप्पल पेमा पहिचान गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » अपरेटिंग प्रणाली » मास्कको साथ अनुहार आईडी कसरी प्रयोग गर्ने
किबोर्डका प्रकारहरू: त्यहाँ कति छन् र मुख्य भिन्नताहरू
यी नि: शुल्क कार्यक्रमहरूको साथ डुप्लिकेट फोटोहरू कसरी मेटाउने